Tilmaamaha Safarka Adelaide Xalaal - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hotels Friendly Hotels
Tilmaamaha Safarka ee Adelaide Xalaal
Adelaide waa caasimada qaranka ee South Australia. Waxay ku taal xeebta bari ee Gulf St Vincent ee bartamaha, qaybta koonfureed ee qaaradda Australia. Adelaide waa magaalada shanaad ee ugu weyn Australia, waxaana ku nool dad ka badan 1.2 milyan. In ka badan seddex meelood meel dadka Koonfurta Australiyaanka ah waxay ku nool yihiin aagga magaalada weyn ee Adelaide.
Adelaide waxay ku taalaa dhul banaan oo udhaxeeya magaalada Adelaide Hills iyo Gacanka waxaana xaduud la leh qaybo badan oo kamid ah gobolada khamriga caanka ku ah ee Australia. Dooxooyinka Barossa iyo Yorke Peninsula waxay jiifaan waqooyiga, gobolada McLaren Vale iyo Langhorne Creek dhanka koonfureed iyo cimilada qabow ee gobolka Adelaide Hills ee dhanka bari. Taariikh ahaan waxaa loo yaqaanaa Magaalada Kaniisadaha sababo la xiriira asalkeeda cusub ee adduunka oo ah kiciyaha xorriyadda diinta, inta badan qaab dhismeedka magaalada gudaheeda waxaa laga hayaa xilligii gumeysiga. Si aad ah ayay saameyn ugu yeesheen qaababkii ka jiray England waqtigaas, qaab dhismeedka hidaha ayaa la mid ah magaalooyin badan oo reer Yurub ah oo la dhisay qarnigii 19aad.
U dhawaanshaha khamriga qiimaha leh iyo gobollada sii kordhaya ee cuntada, iyo sidoo kale hirarka socdaalka ee ka imanaya Jarmalka, Talyaaniga, Griiga, Fiyetnaam, Shiinaha iyo Hindiya waxay ku abuureen cunnooyinka qurxinta dhaqamada kala duwan iyo dhaqanka kafeega ee magaalada iyo hareeraheeda. Dhaqanka kafateerigan waxaa taageeraya sumcadda caalamiga ah ee Adelaide ee fanka iyo gaar ahaan xafladaha farshaxanka ee la qabtay bishii Maarso oo ay ku jiraan Adelaide Festival iyo Adelaide Fringe Festival, oo ah kan labaad oo kaliya marka loo eego Edinburgh Fringe Festival.
Magaaladu waa guriga Adelaide Oval, oo caan ku ah mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan Cricket-ka iyo dib-u-habayn lagu sameeyo martigelinta cayaaraha kubbadda cagta ee AFL inta lagu jiro bilaha jiilaalka. Kubadda cagta Australia waxay taariikh dheer ku leedahay Adelaide kulamada AFL-na waxaa lagu ciyaaraa Adelaide Oval oo ku taal Woqooyiga Adelaide. Adelaide iyo gobollada khamriga ee ku xeeran ayaa sidoo kale martigaliya Tour Down Under, oo ah tartanka ugu weyn ee baaskiil wadista ee Koonfurta Hemisphere iyo marxaladda ugu horreysa ee UCI WorldTour.
Aagga Waqooyiga Australia waa 30 daqiiqo gadaal Australian Standard Eastern Time (AEST) oo laga isticmaalo Victoria ama New South Wales.
Cimilada magaalada Adelaide
Adelaide waa caasimada ugu qalalan Australia, xagaaga waa kuleyl iyo qalalan, iyo jiilaal roob iyo qabow leh.
In xagaaga, celceliska ugu sarreeya waa 29 ° C (84 ° F) laakiin waxaa jira kala duwanaansho badan oo Adelaide badanaa waxay filan kartaa dhowr maalmood sanadkii marka heerkulka maalintii uu kor uga kaco 40 ° C (104 ° F). Roobku waa mid fudud oo aan badnayn xagaaga oo dhan. Celcelis ahaan bilaha Janaayo iyo Febraayo waa qiyaastii 20 milimitir (0.8 inji) laakiin bilaha gebi ahaanba roob la'aanta sinnaba ugama badna. Marka la eego cimilada kulul ee caadiga ah, ku dhowaad dhisme kasta oo dadweyne, dalxiiska gudaha iyo inta badan gaadiidka dadweynaha ayaa si buuxda hawo u leh.
In jiilaalka laga bilaabo Juun ilaa Ogosto, celceliska ugu sarreeya waa 15–16 ° C (59–61 ° F) ugu yaraanna inta badan waa qiyaastii 8 ° C (46 ° F). Jiilaalku wuxuu arkaa roobab joogto ah iyadoo bisha Juun ay tahay bisha ugu qoyan sannadka, celcelis ahaan qiyaastii 80mm. Barafku wuxuu ku badan yahay dooxooyinka Adelaide Hills, laakiin waa dhif meelo kale. Adelaide wax baraf ah kuma arag Xarunta Magaalada lafteeda, in kasta oo marmar dhif yar lagu rusheeyo dhulka sare ee sare ee Mount Lofty iyo Adelaide Hills.
Dayrta iyo guga waa tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah xagaaga iyo xagaaga. Laga soo bilaabo bartamihii Febraayo illaa dhammaadkii Maarso, Adelaide ayaa galay waalan Maarso xilliyada ciidaha ee farshaxanka, muusikada iyo ciidaha ciyaaraha si looga faa'iideysto cimilada dhexdhexaadka ah. Gu'ga sidoo kale wuxuu sameeyaa waqti wanaagsan oo lagu soo booqdo Adelaide, maadaama ubaxyadu sida caadiga ah ubax yihiin ka dib roobabkii qaboobaha.
Dadkii ugu horreeyay ee ku nool bannaanka Adelaide waxay ahaayeen Dadka Kaurna, oo dhulkeedu ka fiday dhulka hadda loo yaqaan Port Broughton ilaa woqooyiga Adelaide, koonfurta ilaa Cape Jervis oo ku taal cirifka koonfureed ee Jasiiradda Fleurieu. Kaurna waxay ku noolaayeen bannaanka Adelaide kooxo kooxeedyo la yiraahdo yerta, eray kaas oo waliba tixraacaya aagga dhulka kaas oo taageeray kooxda qoyska. Yerta kasta waxaa mas'uul ka ahaa dadka waaweyn ee Kaurna ee dhaxlay dhulka oo aqoon durugsan u lahaa kheyraadkiisa iyo astaamihiisa. Taariikhda hodanka ah ee Aborjuniiska Adelaide iyo dhaqanka nool waxaa laga baari karaa Tandanya, oo ah Xarunta Aboriginal-ka iyo Xarunta Taariikhda ee Grenfell Street. Tandanya waa u bilaash inuu booqdo oo dalxiisyada ayaa lagu heli karaa lacag yar.
Muuqaalka hawada ee Fagaaraha Fiktooriya ee ku yaal Xarunta Magaalada, kaas oo ahaa qayb muhiim ah oo ka mid ah qorshaha “shabakadda shabakadda” ee “Adelaide” oo loogu talagalay maalmihii ugu horreeyay ee dejinta.
Ka dib khariidaynta xeebta koonfurta Australia horaantii qarnigii 19aad sahamiyayaal reer yurub ah oo kala ah Matthew Flinders iyo Nicolas Baudin, safar ayaa loo qaaday wabiga Murray oo la qabtay kaas oo si wanaagsan looga warbixiyay dhul xeebeedka Gulf St Vincent. Isla mar ahaantaana, dib-u-habeeyayaasha Ingiriiska waxay doonayeen inay dhisaan gumeysi ku saleysan deggenaasho xor ah halkii ay ka kaxayn lahaayeen daabicidda dembiilayaasha, maadaama dhammaan gobollada kale ee Australiya gumeysanayey xilligaas la aasaasay. Sanadkii 1834, waxaa la aasaasay Shirkadda South Australia waxayna ku qancisay baarlamaanka Ingiriiska inuu meel mariyo sharci abuuraya gumeysi deggeneyaasha xorta ah ee Koonfurta Australia. Bishii Diseembar 1836, ka dib 10 bilood oo safar ah oo ay raaceen maraakiib ka timid England, Guddoomiyihii ugu horreeyay, John Hindmarsh wuxuu ku dhawaaqay abuuritaanka gobolka cusub xaflad ka dhacday meesha hadda ku taal xeebta Glenelg.
Kadib isqabqabsi udhaxeeyey gumeystayaashii, sahamiyahii ugu horeeyey ee Adelaide, William Light wuxuu naqshadeeyey shabakad balaaran oo balaaran oo ku hareereysan seeraha, oo leh hal barxad dhexe (Victoria Square) iyo afar fagaarayaasha yar yar (Hindmarsh, Light, Whitmore iyo Hurtle) oo la dhigay bangiyada koonfureed ee Torrens-ka. Naqshaddii asalka ahayd ee 'Light', oo leh isbeddelo yar-yar, ayaa si weyn u badbaaday illaa maanta.
Warshadaha hore ee magaalada waxay ku saleysnaayeen hareeraha macdanta iyo beeraha, iyadoo Ingriiska uu ahaa suuqa dhoofinta muhiimka ah. Siyaasadda xagjirka ah ee qaar badan oo ka mid ah deganayaasha xorta ah waxay horseedday in Adelaide uu hoy u noqdo dib-u-habeyn hore oo horumarineed oo ay ku jiraan codbixinta qarsoodiga ah ee daabacan, xukunka ugu horreeya adduunka ee haweenka u oggolaanaya inay u codeeyaan oo ay u tartamaan Baarlamaanka iyo midowgii hore ee urur shaqaale iyo dhaqdhaqaaq.
Kadib xiriirkii Australiya sanadkii 1901, Koonfurta Australia waxay bilawday inay u wareegto warshadaha wax soo saarka sare, hawshan oo ay u dirtay overdrive dowladii muddada dheer ee muxaafidka Premier Play Thomas Playford dagaalkii labaad ee aduunka kadib. Koonfurta Australia adoo siinaya dhul jaban iyo canshuur yar. Tani, oo ay weheliso kororka ballaaran ee gawaarida gawaarida, ayaa horseeday cufnaanta hoose ee Adelaide maadaama shaqaaluhu ku noolaayeen agagaarka warshadaha ay ka shaqeynayeen hareeraha bannaanka.
Soo guuritaan ballaaran oo ka yimid koonfurta Yurub ayaa beddelay dhaqanka 'Angola-Celtic' ee Adelaide, iyadoo muhaajiriinta Griigga ah ay inta badan degeen galbeedka gudaha iyo hareeraha koonfurta iyo tahriibayaasha Talyaaniga ee degay xaafadaha bariga iyo waqooyi-bari ee gudaha. Aqoonsiyadan dhaqameed waxay sii soconayaan maanta, iyada oo qaaradaha iyo makhaayadaha ay yihiin astaamo guud oo ka mid ah magaalada gudaha ee Adelaide.
In kasta oo dhaqaalaha Koonfur Australia uu kobcayay, haddana nolosha dadwaynaha iyo dhaqanka ayaa lumisay inta badan xagjirnimadii hore, iyadoo sharciyo buluug ah u baahan yihiin baararka iyo baararka in la xidho lixda fiidnimo - taas oo keenaysa "lixda saacadood ee isbaddalka ah". Siyaasadda White Australia waxay sidoo kale ka dhigan tahay in dadka deggan Adelaide ay si weyn uga soo jeedaan asal ahaan Yurub.
Magaalada caasimada ah ee Cosmopolitan
Lixdamaadkii ayaa isbedel layaableh laga dareemay nolosha dhaqanka ee Adelaide, bilawgii Adelaide Festival of Arts iyo Adelaide Fringe Festival, oo wax ka badalay dhaqanka fanka ee Adelaide waxaana dhamaadka tobanka sano la arkaayay doorashadii dawladii ugu horaysay ee shaqaalaha tan iyo 1960s. Markay ahayd 1930, Don Dunstan wuxuu noqday Premier of South Australia. Dunstan wuxuu ahaa shaqsi isbadal badan wuxuuna raadiyay inuu dib uhabeeyo Adelaide qaab dhismeedka magaalo madax casri ah oo casri ah. Dawladdii Dunstan waxay soo afjartay lixdii saacadood ee wareejinta, wadada loo maro Rundle Street oo abuureysa Rundle Mall waxayna dhistay Xarunta Festifaalka, iyadoo abuurey xarun farshaxan oo ku taal Adelaide. Dowladiisa waxay hirgalisay isbadalo horusocod oo kaladuwan, oo ay kamid tahay in laga dhigo Koonfurta Australia xukunka ugu horeysa ee Australia si loo sharciyeeyo khaniisnimada. Waqtigaan sidoo kale wuxuu arkay isbeddelo ku yimid sharciyada socdaalka ee Australiya oo arkay muhaajiriinta Vietnam iyo Shiinaha oo ku biiraya mowjadihii hore ee hijrada iyo abuuritaanka bulshooyinka woqooyi-galbeed iyo xaafadaha galbeedka, iyo sidoo kale Gouger Street ee luuqadaha badan ee Chinatown agagaarka Suuqa Dhexe ee Adelaide.
Markii ay lumisay dowladdii muddo hal xilli ah muxaafidka dhammaadkii 1970-yadii, Labour wuxuu ku soo noqday xafiiska John Bannon 1980s. Hogaamiye saaxiibtinimo ganacsi ka badan Dunstan, Premier Bannon wuxuu rabay inuu wado horumarka magaalada Adelaide, isagoo arkay dhismaha Adelaide ee dhismaha ugu dheer ee hada loo yaqaan Westpac House iyo horumarinta Xarunta Shirarka Adelaide iyo Adelaide Casino, sikastaba ha noqotee amaahda bangiga oo xun ayaa arkay gobolka. - Bangiga Gobolka ee Koonfurta Australia oo dib loo taageeray wuxuu burburay horaantii 1990-meeyadii, wuxuu u baahan yahay dammaanad-qaad ballaaran oo dowladeed wuxuuna gobolka galiyaa qaan.
Soo nooleynta Bangiga Gobolka ka dib
Sagaashameeyadii markii ay jirtay dowladdii Liberalka ee ay hogaaminayeen Premiers Dean Brown, John Olsen iyo Rob Kerin waxay arkeen dowlada muxaafidka ah oo ku dhaqaaqeysa iibinta hantida isla markaana yareyneysa howlaha dowlada si loo yareeyo deynta gobolka. Hoos u dhaca ku yimid qarashka dowlada, iyo sidoo kale hoos u dhaca ku yimid wax soo saarka Australia kadib markii ay baabi’isay darbiga canshuuraha ee dowlada federaalka, waxay horseeday hoos u dhac ku yimaada dhaqaalaha Koonfurta Australia iyo u haajirida baahsan ee caasimadaha bariga, gaar ahaan Melbourne.
Shaqada ayaa ku soo noqotay xafiiska 2002 iyadoo uu maamulo Mike Rann oo doonayay inuu dib u habeeyo saldhiga warshadaha ee Adelaide si uu diirada u saaro adeegyada waxbarashada, macdanta iyo warshadaha difaaca, iyo sidoo kale inuu ku dhiso awoodaha khamriga Dowladii Rann ayaa maal gashatay dib u dhiska magaalada, iyada oo dib u habeyn lagu sameeyay gaadiidka dadweynaha, dhismaha isbitaal cusub oo dhexe iyo dib u habeynta Adelaide Oval. Toban sano ka dib markii uu hogaamiyaha Premier ahaa Rann, Labour waxay doorteen Jay Weatherill inuu noqdo Premier 2011, kaasoo inta badan sii waday qorshahan, laakiin diirada la saaray dib u habeynta goobaha dadweynaha ee magaalada gudaheeda iyadoo loo marayo nasinta xayiraadaha qorshaynta iyo liisanka khamriga yar yar baararka.
Diyaarad ugu raac Adelaide
Gegada Diyaaradaha Caalamiga ee Adelaide (waa qiyaastii 7 km (4.3 mi) dhanka galbeed ee Magaalada waxayna u dhowdahay xeebaha dalxiiska ee caanka ah ee Glenelg iyo Henley Beach.). Gegida Diyaaradaha Caalamiga ah ee Adelaide ayaa si la yaab leh si fiican isugu xiran, waxayna leedahay duulimaadyo caalami ah oo maalinle ah xarumaha Aasiya, Bariga Dhexe iyo New Zealand kuwaas oo u oggolaanaya isku xirnaanta hal-joogga ah ee daafaha adduunka. Duulimaadyada soo noqnoqda ee isku xira Sydney ama Melbourne ayaa laga yaabaa inay jaban yihiin.
Socotada ka Asia duullimaadyo toos ah ka qaadi kara Hong Kong (on Cathay Pacific), Singapore (Singapore Airlines), Kuala Lumpur (Malaysia Airlines), Denpasar (Jetstar Airways) iyo Guangzhou (China South Airlines). Socotada ka Bariga Dhexe ama waqooyiga Afrika duullimaad maalinle ah ka raaci kartaa Emirates iyada oo loo sii marayo Dubai, ama Qatar Airways oo ka timaadda Doha. Socotada ka Europe u raaci kartaa safar hal-joogsi ah magaalada Adelaide mid kasta oo ka mid ah kuwa xamuulka qaada.
Socotada ka socda Koonfur Afrika waxay marka hore toos ugu duuli karaan Perth ka dibna waxay ku xirmi karaan duulimaad gudaha ah oo aadaya Adelaide.
Socotada ka New Zealand qaadi kartaa duulimaad toos ah oo maalin kasta ka duulaya Auckland oo ku taal Air New Zealand. Socotada ka Waqooyiga Ameerika ama Koonfurta Ameerika ku safri karaa hal-joog Diyaaradda Air New Zealand iyada oo loo marayo Auckland ama u sii gudbi kara duulimaad joogto ah oo gudaha ah ka dib marka ugu horreysa ee ay ka degto Sydney, Melbourne ama Brisbane.
Adeegyada gudaha Australia gudaheeda waxaa ka mid ah adeegyo joogta ah oo laga helo caasimad kasta oo caasimadeed oo ah shirkadaha sida buuxda u sida [Qantas] iyo Virgin Australia. Jetstar iyo Tiger sidayaal miisaaniyadeed waxay u shaqeeyaan adeegyo aan badnayn, qiimo dhimis badanna u badan Melbourne, Sydney iyo Gold Coast.
Adeegyada gobolka hawlgalladana waxaa bixiya shirkadda 'Regional Express Airlines' (Rex), Sharp Airlines, Alliance Airlines, Cobham Airlines iyo Qantaslink duulimaadyada ay maamulaan labada Cobham Airlines iyo Alliance Airlines. Adeegyadan waxay inta badan ka shaqeeyaan magaalooyinka gobolka Koonfurta Australia iyo Xarumo ay ka mid yihiin Mt Gambier, Kingscote, Port Lincoln iyo Whyalla.
Waxaa jira kaliya hal terminaal oo loogu talagalay bixitaanka caalamiga iyo gudaha, marka loo eego wareejinta ayaa ah kuwo aan xuduud lahayn. Gegada diyaaraduhu waxay leeyihiin ATM-yada iyo isbeddelka lacagta. Cunto iyo dukaameysi ayaa laga heli karaa dhinac iyo hareeraba. Sanduuqyada ayaa laga heli karaa aagga kirada gaariga ee carpark-ka, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah kabadh waaweyn oo ku habboon sanduuqyada baaskiilka. Wi-Fi bilaash ah ayaa laga heli karaa terminaalka oo dhan.
Inta udhaxeysa garoonka diyaaradaha iyo magaalada
Adelaide Metro's JetBus J1 / J2 / J7 / J8 caadiga ah wuxuu isku xiraa garoonka diyaaradaha Magaalada, Glenelg iyo qaar ka mid ah Xarumaha wax iibsiga ee waaweyn. Adeegyada J1 waxay tagaan 15kii daqiiqo kasta 8 subaxnimo ilaa 6 fiidnimo maalin kasta oo ay tagaan Magaalada, wayna yaraadaan 5 AM ilaa 11PM. Safarka Magaalada wuxuu qaataa qiyaastii 25 daqiiqo inta lagu jiro saacadda ugu sarreysa. Intaa waxaa dheer JetBus J1X waxay bixisaa adeeg toos ah laga bilaabo garoonka diyaaradaha ilaa magaalada Isniinta ilaa Jimcaha saacad kasta inta u dhaxaysa 5 AM ilaa 10 AM iyo 4 PM ilaa 9 PM oo leh waddo wareegsan oo ku wareegsan CBD si loogu fududeeyo hoteelada. Adeegyada Glenelg waa nus saac kasta maalintii, habeenkiina waa ka yar yahay. Adeegyada Arndale, Galbeedka Harooyinka iyo Xarunta dukaamaysiga Marion waa saacad inta lagu jiro maalmaha shaqada.
Basasku waxay ka baxaan hal joogsi oo gooni ah oo bidix ah (galbeed) ee Gawaarida Gaaban Gaaban ee ka baxsan Terminaalka weyn. Dhammaan basaska dhammaan jihooyinka ayaa ka tagaya hal joogsigan, markaa ka hubi wejiga hore ee baska si aad u hubiso inuu ku sii jeedo meesha aad rabto inaad tagto! Macluumaadka baska realtime-ka ah ayaa loo heli karaa joogsigan iyo dhamaan istaagida Adelaide Metro ama barnaamijyo gaar ah oo loogu talagalay Smartphone-kaaga sida metroMATE.
JetBus waa qayb ka mid ah shabakadda Adelaide Metro, sidaa darteed noocyada tikidhada caadiga ah iyo qiimaha lagu raaco qaybta gaadiidka dadweynaha ayaa khuseeya, tigidhka loo adeegsado JetBus waxaa loo isticmaali karaa bas kale, tareen ama taraam nooca ay yihiin. Baaskiillada sidoo kale waxaa laga heli karaa garoonka diyaaradaha mashiinka wax lagu iibiyo ee ku dhegan istaagga JetBus.
Taksiyada waxaa laga heli karaa hoosta banaanka hore ee xarunta. Taksi u socda Magaalada wuxuu ku kacaa qiyaastii $ 30 inta lagu jiro subaxda ugu sarreysa iyo ku dhowaad $ 20 waqtiyada kale, taas oo ka dhigi karta mid dhaqaale ahaan sida JetBus koox ahaan. Wadayaashu marwalba way isticmaali doonaan mitirka, laakiin $ 2 lacag dheeraad ah ayaa la bixin doonaa marka lagu daro qaddarka mitirka ee laga soo qaado garoonka diyaaradaha.
Qaran weyn shirkadaha baabuurta kirada ah ku shaqee kiishka dabaqa hoose ee sheegashada shandadaha oo ay ku jiraan AVIS, Miisaaniyadda, Europcar, Hertz, Thrifty iyo Redspot Sixt. Baarkinka baabuurta la kireysto wuxuu ku yaal heer dhulka oo si toos ah uga soo horjeedka xarunta.
Safar baabuur ku tag Adelaide
Adelaide waa ugu yaraan maalin un kaxaynta magaalooyinka waaweyn ee ku yaal xeebta bari ee Australia. Wadada ugu gaaban ee baabuur wadista ee ka timaadda Adelaide ilaa Melbourne waxay qaadataa 8-9 saacadood. Waxa jira qaybo wadooyin waaweyn ah, laakiin waddooyinka ayaa u badan 2 waddo haad oo tayo sare leh.
From Melbourne, Adelaide waa 736km (457 mi) oo loo maro Horsham (National Highway 8) ama 901km (560 mi) iyadoo la marayo Mt Gambier (National Highway 1). Safarka aad ku tagayso Mt Gambier wuxuu kaa sii dhex marayaa gobolka Coonawarra wine, oo ka mid ah gobollada ugu caansan ugxanta sauvignon ee Australia sidoo kale wuxuu ku habboon yahay safar dhinaca ah oo loo maro Waddada Weyn ee Weyn. Safarka loo maro Horsham waa mid toos ah, oo ku yaal waddooyin waawayn oo tayo sare leh, laakiin waxaa ku yar meelaha dalxiiska.
From Sydney, Adelaide waa 1,422km (884 mi) iyada oo loo marayo Wagga Wagga iyo Mildura (National Highway 20). Xaaladaha Wadada weyn ee ka timaada Sydney ilaa Wagga Wagga ayaa saacado ka jaray safarka. Wadadani waxay sidoo kale maraysa meel u dhow Canberra, caasimada qaranka Australia, taas oo 1,196km (743 mi) u jirta Adelaide.
Ikhtiyaar kale oo ka imanaya Sydney waa wadada 1,659km (1031 mi) ee loo maro Broken Hill (National Highway 32), taas oo kuu marineysa Dibedda iyo mid ka mid ah magaalooyinka ugu taariikhda macdanta badan Australia. Wadada oo ah 2,031km (1,262 mi) Brisbane sidoo kale wuxuu maraa Broken Hill.
Halka Adelaide ay tahay caasimada ugu dhow qaranka Perth, safarka 2,550km (1584 mi) ee Eyre Highway wali waa mid dhib badan, in kasta oo uu wado gaar ah u maro qaar ka mid ah meelaha ugu fog adduunka. Sidoo kale, safarka 3,027km (1884 mi) woqooyi ilaa Darwin sii mara Alice Springs waxay ku safraysaa dhabbaha dhabta ah iyo Uluru-Kata Tjuta National Park waxay u jirtaa dhowr saacadood oo kaliya wadada weyn ee woqooyi.
Tareen ku raac Adlaide
Wadada Tareenka ee Koonfurta Wanaagsan wuxuu ka shaqeeyaa Adelaide kana soo noqdaa. Australia oo dhan tareen ahaan waxay aadaan ilaa Alice Springs iyo Darwin, The Overland waxay aadayaan Melbourne, Across Australia tareenka waxay aadayaan Perth, Broken Hill iyo Sydney. Safaradaani waa khibrado tareen, waxayna bixiyaan hurdo, iyo fursad aad ku qaadatid gaarigaaga tareenka. Si kastaba ha noqotee, waxay qaataan waqti aad u dheer oo aan kala beddel lahayn oo ka qaalisan safarka baska ama diyaaradda, marka laga reebo marinka Melbourne-Adelaide, kaas oo ka raqiisan ama qiimihiisa u dhigma qiimaha tikidhada. Dheeraad ah, tareenadu waxay joogsadaan joogsiyada dhexe oo laga yaabo inaysan u adeegin isku xirnaanta duulimaadka, gaar ahaan wadada Melbourne-Adelaide.
Tareenadan gobalada ka taga ayaa Terminal -ka Adelaide Parklands magaalada banaankeeda. Istaanka waxaa lagu tagi karaa gaari ama bas ka yimaada Wadada Richmond. Tan iyo markii la burburiyey saldhigga Keswick, ma jiraan xiriirro shabakadda tareenka hareeraheeda. Tagaasida sidoo kale waa la heli karaa si ay ula kulmaan dhammaan dadka imanaya.
Ma jiraan adeegyo tareen waddan oo laga helo Koonfurta Australia.
Basaska gobolada dhexe waxaa ka shaqeeya dhowr shirkadood oo tababarayaal ah oo ay ka mid yihiin Greyhound, Firefly iyo V / Line. Safarka ka imanaya Melbourne wuxuu qaadanayaa ku dhowaad kow iyo toban saacadood iyo badh, oo leh adeegyo maalin iyo habeenba ah. Safarka ka imanaya Sydney wuxuu qaadan karaa ilaa 24 saacadood oo qeexitaan ahaan, safarada habeenki. Qiimaha waa kayaryahay safarka tareenka, laakiin wuxuu noqon karaa wax kabadan qarashka duulimaadka miisaaniyada hadaad si fiican usameysato kahor.
Basaska gobolka ilaa magaalooyinka Koonfurta Australia magaalooyinka iyo magaalooyinka sidoo kale waxaa ka shaqeeya shirkadaha basaska ee gobolada, laakiin shirkadaha tababarayaasha South Australia ee ay ka midka yihiin LinkSA iyo Premier Stateliner ayaa inta badan bixiya adeegyo badan.
Ku dhowaad dhammaan basaska gobollada iyo kuwa gobollada ayaa ka baxa Xarunta Dhexe ee Basaska ee Adelaide at 85 Franklin Street ee Magaalada. Saldhiga Dhexe ee Basku wuxuu shaqeeyaa 05: 00-21: 30, 7 maalmood usbuucii. Waxay leedahay adeegyo casri ah iyo waliba maqaaxi waxayna ku taal waddo ka fog Adelaide Central Market, supermarket Coles iyo Chinatown.
Maraakiib fara badan oo dalxiis ayaa wacaya Terminalka Rakaabka ee Port Adelaide inta lagu jiro xilliyada doonyaha dalxiiska, oo soconaya Nofeembar illaa Abriil sannad kasta. Xilli-ciyaareedkii 2012/2013, maraakiibtu waxay ka soo dageen dekedda wadar ahaan 26 maalmood xilli-ciyaareedkii oo dhan. Liiska maraakiibta imanaya Adelaide waxaa laga heli karaa Flinders Ports.
Ku soo wareegida Adelaide
Safarka baaskiil ee Adelaide
Baaskiil SA, 111 Franklin St (Kaliya dhanka Waqooyi-Galbeed ee Istaanka Basaska weyn),. Waxay ku shaqeysaa a adeeg kiro baaskiil bilaash ah oo ay kafaala qaadeen koox golayaasha magaalada gudaheeda ah. Baaskiiladaha waxaa laga heli karaa in kabadan 10 goobood oo magaalada iyo hareeraheeda ah bilaash, laakiin waa in lasoo celiyaa Isniinta ilaa Jimcaha kahor 16:30 ama 17:00 maalmaha fasaxa ama $ 25 ayaa la bixin karaa. Qorsheyn ayaa loo samayn karaa in baaskiiladaha la kireysto habeenki si ay u helaan lacag dheeri ah laakiin kirooyinka oo dhan waa la joojiyaa haddii heerkulka la saadaalinayo inuu kor u kaco 38 ° C. Liiska meelaha la kireysan karo ayaa ku qoran Bicycle SA websaydhadeedu Baaskiilku waa tallaabo seddex nooc oo dambiilo hore iyo mid xamuul ah oo gadaal xambaarsan (laakiin waxaad u baahan doontaa inaad bixisid xargaha iyo laashka). Biriigga wiciyaha hore, bareega gadaal waa isku habeyn gadaal-marin ah. Shimano 3 xawaare marsho. Waxay sidoo kale ku siin doonaan quful adag oo isku dhafan iyo koofiyad baaskiil ah markaad ka tagto aqoonsi sawir leh.
Safarka caanka ah waa in laga raaco Bartamaha Magaalada oo ku teedsan Wabiga Torrens ilaa West Beach, ka dibna Glenelg iyo gadaal. Baaskiilkaaga kuma raaci kartid Glenelg Tram ama bas kasta, Xitaa banaanka saacadda ugu sarreysa, si kastaba ha noqotee waxaad ku qaadi kartaa tareennada. Beddelka in taraamka laga soo celiyo Glenelg waa in la raaco 20 daqiiqo oo dheeraad ah koonfurta dhanka xeebta illaa Saldhigga Brighton ee Khadka Dhexe ee Noarlunga halkaas oo ay ku yaalliin tareenno si isdaba joog ah ugu laabta Adelaide.
Gaadiidka dadweynaha ee magaalada Adelaide
Tilmaamaha safarka saxda ah waxaa laga heli karaa Khariidadaha Google. Si aad u wareegto, kaliya ku qor cinwaankaaga "cinwaan" iyo "ka" cinwaanka (ama isticmaal goobta hadda) aaladdaada (oo ay ku jiraan iPhone, Android), ka dibna dooro astaanta gaadiidka dadweynaha. Macluumaadka waqtiga imaanshaha waxaa laga heli karaa shabakada Adelaide Metro ama barnaamijyo dhowr ah oo loogu talagalay taleefannada casriga ah (tusaale.
Tigidhada iyo macluumaadka marinka
Tareenka tareenka, taraamka iyo adeegyada basaska waxaa lagu shaqeeyaa magaca magaca mideysan Adelaide Metro oo isticmaal nidaam tigidh midaysan, "Metroticket".
Rakaabka Rakaabka InfoCentre, Geeska Geeska Wadooyinka King William & Currie, Adelaide CBD, lacag la’aan: 1300 311 108. Isniinta ilaa Jimcaha 08: 00-18: 00, Sa 09: 00-17: 00, Su 11: 00-16: 00. Ama websaydhka Adelaide Metro waa meelaha loo booqdo jadwalka iyo macluumaadka wadada. Macluumaadka gaadiidka dadweynaha ee saxda ah ayaa sidoo kale laga heli karaa Khariidadaha Google, oo leh qorsheeye safar fudud haddii aad doorato jihooyinka 'Transit' midkood bogga ama taleefanka casriga ah.
Tigidhada safarka keli ah ee wareejinta aan xadidnayn laba saacadood ayaa lagu iibiyaa basaska, taraamyada iyo saldhigyada tareenka waaweyn ee ah $ 5 ugu sarreysa iyo $ 3.00 oo ka baxsan heerka ugu sarreeya. Haddii kale, tigidh $ 9.10 daytrip ah ayaa la heli karaa, oo u oggolaanaya safarka aan xadidneyn ee aagga Adelaide Metro maalin dhan.
Socotada ku sugan Adelaide in ka badan dhowr maalmood waa inay ku iibsadaan Metrocard $ 10 taas oo la socota $ 5 qiimaha lagu daray. Safarada ku yimaada Metrocard waxay ku kacday $ 3.19 ugu sarreysa iyo $ 1.75 oo ka baxsan heerka ugu sarreeya. Baaskiillada waxaa lagu iibiyaa saldhigyada waaweyn ee tareennada (Adelaide, Elizabeth, Gawler, Noarlunga Center, Oaklands, Mawson Lakes iyo Salisbury) iyo waliba inta badan wargeysyada iyo dukaamada geeska. Liiska meelaha ayaa ku yaal bogga Adelaide Metro. Baaskiillada ayaa lagu buuxin karaa meel kasta oo lagu iibiyo iyo sidoo kale tareennada iyo taraamyada iyadoo la isticmaalayo qadaadiic ama kaararka deynta ee waaweyn.
Waxa kale oo jira baasaboor $ 25 ah oo soo booqda oo loo isticmaali karo safarka aan xadidnayn ee shabakadda muddo 3 maalmood ah. Ka dib muddada 3 maalmood ah, kaarka ayaa la buuxin karaa oo loo isticmaali karaa sida birta caadiga ah oo kale.
Adelaide Metro tareenka
Nidaamka tareenka ee Adelaide Metro wuxuu leeyahay afar khadad oo waaweyn, oo leh laba layn oo dheeri ah.
The Khadadka Dekedda Dibadda, kaas oo kor uga sii baxa Jasiiradda Le Fevre ee waqooyi-galbeed ee magaalada iyada oo loo sii maro Port Adelaide. Khadadka Hareeraha Dibadda wuxuu ku habboon yahay xaafadda dalxiiska ee Semaphore, degmada taariikhiga ah ee badda ee Port Adelaide iyo Queen Street cafe strip ee ku taal Croydon. The Khadadka Grange laamo ka baxa khadka Harbor-ka Dibadda ee Woodville.
The Qadka Gawler, Gawler Central ee waqooyiga magaalada, iyada oo loo sii marayo Ovingham, Mawson Lakes, Salisbury iyo Elizabeth.
Korantada Khadadka Baddu, oo ku fidsan Seaford oo ku taal koonfurta fog ee magaalada, iyada oo loo sii marayo xeebta xeebta ee Brighton iyo Noarlunga Center. Khadadka Seaford wuxuu bixiyaa marin xeebeedyo ku yaal Brighton iyo Hallett Cove, iyo sidoo kale Westfield Marion oo ku taal Oaklands. The Khadadka toonsley laamo ka bixiya khadka Seaford oo waxay shaqeysaa oo keliya Isniinta ilaa Jimcaha illaa fiidka hore.
Sawirka Khadka Belair kaas oo ku fidsan ilaa Belair oo ku taal buuraha Adelaide ee loo maro Blackwood iyo hareeraha koonfurta-bari ee magaalada. Khadadka Belair wuxuu faa'iido u leeyahay helitaanka Belair National Park.
Baska SouthLink Adelaide Metro
Adelaide Metro waxay leedahay shabakad bas oo dhammaystiran, oo ku taal Magaalada. Khariidado iyo macluumaad buuxa ayaa laga heli karaa shabakadda Adelaide Metro. Wadooyinka waaweyn badankood oo ay kujiraan goobaha kafateeriyada sida The Parade, Prospect Road, Henley Beach Road, King William Road iyo O'Connell St waa 'Go Zones' kuwaas oo leh basas caadi ah maalmaha shaqada ugu yaraan 15kii daqiiqaba illaa fiidka hore. Shabakada basaska Adelaide waxay u fidsantahay xaafadaha bannaanka ka xiga, ilaa Haadleyda Adelaide ee bariga, illaa McLaren Vale ee koonfurta (in kasta oo basasku ay yar yihiin) iyo illaa iyo Gawler oo woqooyiga ah. Ma daboolayo Dooxada Barossa. Soo noqnoqodka xaafadaha bannaanka ayaa aad uga hooseeya kan magaalada.
The O-Bahn waa khad bas oo si deg deg ah ku socda oo u socdaala xaafadaha waqooyi-bari ee Adelaide. Basaska O-Bahn waxay ka socdaan Grenfell Street ee Magaalada, waxayna galaan O-Bahn oo ku yaal Hackney waxayna istaagaan is-weydaarsiga Klemzig, Paradise iyo Modbury. Ka dib markay ku dhammaadeen O-Bahn, basasku waxay u socdaan si la mid ah baska caadiga ah si ay u gaaraan halka ay u socdaan. Adeegyada O-Bahn waa kuwo aad u soo noqnoqda, sida badanaa 3dii ilaa 5tii daqiiqo ee kasta inta lagu jiro saacadda ugu sarreysa ee is-weydaarsiga iyo 15kii daqiiqaba marka ugu sarreysa laga baxo.
Digniin ka bixi in inta jeer ee basku si aad ah hoos ugu dhacayaan wixii ka dambeeya 19:00, iyadoo saacadaha u dhexeeyaa ay caadi ka yihiin hareeraha hareeraha, saacad badhkeed oo loo maro Go Zones iyo 15-kii daqiiqo ee kasta O-Bahn. Dhammaan adeegyadu waxay joojinayaan shaqada saqda dhexe, markaa hubi jadwalkaaga oo filo inaad raacdo taksi haddii loo baahdo haddii aad banaanka ka baxdo waqtigaan ka dib. Aad u aasaasi ah Saqdii dhexe kadib adeegyada basaska ee marinnada xaddidan waxay shaqeeyaan saacad kasta illaa saqda dhexe habeenada sabtida kaliya.
free The Magaalada Loop (99C) basku wuxuu shaqeeyaa maalmaha shaqada laga bilaabo 07: 40–18: 00 15min kasta. Jimcaha, waxay sidoo kale socotaa habeenkii 18: 00-21: 20 30kii daqiiqo kasta, Sabtiyada 08: 00–17: 00 30-kii daqiiqo kasta iyo Axadaha (iyo fasaxyada guud) 10: 00-17: 00 30-kiiba. Waxay leedahay wadiiqooyin saacad iyo dhinacba u socda oo mid walba leh ilaa 30 joogsi oo qaadanaya dhammaan Xarumaha waaweyn ee dhaqanka iyo ganacsiga ee Magaalada, laga bilaabo Fagaaraha Victoria oo ay ku jirto Saldhigga Tareenka Adelaide. Basasku waxay wataan marin-u-helitaan heer-dhulka ah.
Tareenka laga raaco tareenka taraley Square ee Glenelg
Adelaide ayaa leh khadka taraamka kaas oo ka socda Xarunta Madadaalada Adelaide ee Hindmarsh iyada oo loo sii maro Magaalada, ka dibna hoos loo maro xaafadaha koonfur-galbeed ilaa xeebta Glenelg. Safarka Magaalada ee u dhexeeya Xarunta Madadaalada ee Adelaide iyo South Terrace waa lacag la’aan, halka safarka Glenelg uu u baahan yahay tigidh ama Metrocard. Tigidhada waxaa laga iibsan karaa taraamka taraafikada, ama mashiinnada tigidhada meelaha qaarkood.
Ka sokow ku habboonaanta dalxiiska caanka ah ee Glenelg oo ka timaadda Magaalada, taraamka ayaa sidoo kale istaagaya Rundle Mall, Victoria Square oo u dhow Adelaide Central Market iyo Waqooyiga Terrace oo u dhow Saldhigga Tareenka ee Adelaide. Ku safridda woqooyiga tareenka waxay ku geyneysaa Hindmarsh iyo Bowden, oo ah guriga Adelaide Entertainment Center oo lagu qabto xafladaha garoonka iyo sidoo kale makhaayad caan ah iyo makhaayad ku taal Port Road iyo waddooyinka dhinaceeda oo dhinac ah.
Haddii aad gaari wadid, ku habboon (oo caan ah) beddelaad dhigashada baarkinka Magaalada waa in la dhigto Xarunta Madadaalada oo tareenka lagu raaco Magaalada. Kaliya waxay ku kacaysaa $ 4 maalmaha shaqada oo dhan, taas oo aad uga raqiisan baarkinka magaalada.
Xarunta Magaalada waa mid kooban oo si fudud ayaa loogu dabooli karaa lugta. Soojiidashada badankoodu waxay ku yaalaan hareeraha u dhexeeya Waqooyiga Terrace iyo Fagaaraha Victoria ee labada dhinac ee King William Street. Xarunta wax iibsiga ee Rundle Mall gabi ahaanba waa la lugaynayaa. Aagga Gouger Street iyo Suuqa Dhexe ee Adelaide ayaa sidoo kale ah meelaha ugu wanaagsan ee loogu safro socotada.
Socdaalayaashu waxay jecel yihiin inay ku sii socdaan orodka inta ay maqan yihiin waxay isticmaali karaan wadooyin caan ah oo orodka ah oo ku teedsan wabiga Torrens iyo illaa iyo halka loo yaqaan 'Parklands'.
Adelaide Taksiyo Madaxbanaan
Adelaide waxay leedahay saddex shirkadood oo taksi oo waaweyn kuwaas oo shaqeeya 24/7:
Adelaide Taksiyo Madaxbanaan,.
Yellow Cabs Koonfurta Australia,.
Cabsiyo ku yaal Koonfurta Australia waa cad (xitaa kuwa ay ka shaqeeyaan 'Cabs Yellow') oo si cad ayaa loo calaamadeeyay. Guud ahaan waa suurtagal in lagu soo xiro taksi wadada dhexdeeda ama hudheel weyn inta lagu jiro saacadaha ganacsiga ee Magaalada, laakiin xaafadaha waxaad caadi ahaan u baahan tahay inaad wacdo mid ka mid ah adeegyada ballansashada shirkadda ee ku qoran. Waxaa jira dhowr darajooyin taksi oo ay ka shaqeeyaan Golaha Tagaasida habeenki dhamaadka usbuuca. Darajooyinka taksi ee kormeera waxay bixiyaan amni dheeri ah oo leh nalalka iyo kormeerka ilaaliyaha iyo sarkaalka amniga. Waxay shaqeeyaan 23: 00-03: 00 Jimcaha iyo 23: 00-05: 00 Sabtida. Khariidadaha goobaha ayaa laga heli karaa websaydhkooda.
Dhamaan tagaasida magaalada Adelaide waxaa looga baahan yahay Dowlad Goboleedka inay ku soo dalacaan sicir jaangooyooyin nidaamsan, sida ku xusan waqtiga safarku bilaabmayo. Tarif one waa sicirka tarifu-ga caadiga ah iyo tarifu labo ayaa ah sicir sare oo soconaya inta udhaxeysa Isniinta ilaa Jimcaha 19: 00-06: 00, iyo maalmaha fasaxa iyo ciidaha. Darawalladu marwalba waxay isticmaalaan mitirka sharci ahaanna waxaa looga baahan yahay inay sidaas sameeyaan. Bixinta waxaa lagu bixin karaa lacag caddaan ah, EFTPOS, kaararka debit iyo amaahda iyo Cabcharge. Waa fikrad fiican inaad u sheegto darawalka haddii aad qorsheyneyso inaad ku bixiso qaab aan ahayn lacag ka hor intaadan bilaabin safarkaaga, maadaama makiinadaha ay noqon karaan kuwo aan la isku halleyn karin.
Xarunta magaalada Adelaide iyo agagaarkeeda gudaha sida Glenelg, Norwood iyo Prospect si fudud ayaa looga gudbaa socodka iyo adeegsiga gaadiidka dadweynaha, si kastaba ha noqotee haddii aad filayso inaad waqti badan ku qaadato meel ka baxsan CBD ama aad qorsheynayso safar aad ku tagto gobol khamri ah, baabuur waa waxtar u leh in laga fogaado safarada dhaadheer ee gaadiidka dadweynaha ama marka la eego Dooxada Barossa, si aad u hesho agagaarka.
Si ka duwan caasimadaha kale ee gobolka Australia, Adelaide ma laha shabakad waddooyin xawli ah oo toos u soo gala Xarunta Magaalada. Jidadka laamiga ah ee jira waxay ka bilaabmaan xaafadaha dibadda waxaana loogu talagalay in gaadiid loo qaado magaalooyinka ku dhow dhow. Xadka xawaaraha ee inta badan waddooyinka waawayn waxaa lagu qoray 60km/h, inkasta oo xadka xawaaraha caadiga ahi yahay 50km/h haddii aan la dhejin xadka xawaaraha. Xaddidaadaha xawaaraha ayaa si adag loo dhaqan geliyaa, oo xitaa marba mar aad u yara durugsan xadka xawaaraha ayaa ku siin kara tigidh leh ganaax $ 350 ah.
Dhammaan waddooyinka Adelaide iyo kuwa guud ahaan Koonfurta Australia waa lacag la’aan.
Qaran weyn shirkadaha baabuurta kirada ah ku shaqee kiishka garoonka diyaaradaha ee Adelaide ee dabaqa hoose ee u dhow sheegashada shandadaha oo ay ku jiraan AVIS, Miisaaniyadda, Alpha, Europcar, Hertz, Thrifty iyo Redspot Sixt.
Guriga Magaalada Glenelg
Jardiinooyinka Badeecada Adelaide. Jardiinooyinku way xasilloon yihiin oo way nasanayaan in kasta oo ay ku jiraan bartamaha magaalada. Waxay ka kooban yihiin dhul badan oo doog badan leh oo ku habboon nasashada, bannaanka jardiinooyinkana waxaa ku yaal jardiinooyinka magaalada lagu ciyaaro oo kubbadda lagu ciyaaro iyo dalxiisyada lagu qaban karo. Waxaa ku yaal kafateeriyada jardiinooyinka iyo goob lagu xanaaneeyo. Bilaash
Conservatory Laba-Sano-Labaad. Tani waa meel qiimo leh in la booqdo, waxay u ekeysiinaysaa nidaamka dhirta-roobka yar yar ee micro-eco, oo lagu dhammaystiray ceeryaanta ka soo dhacaysa saqafka. Boosku wuxuu xajinayaa tiro geedo waaweyn ah oo dhir baaxad leh leh iyo dhirta hoose ee dhirta ka baxa waqooyiga Australia, Papua New Guinea, Indonesia iyo Jasiiradaha Baasifigga ah ee u dhow, kuwaas oo in badan oo ka mid ahi ay halis ku jiraan ama ay ku sugan yihiin deegaanadooda dabiiciga ah. Digniin, waa diirimaad iyo qoyaan gudaha. Dhamaan lugeyntu waxay leeyihiin marin curyaamiin buuxda. Gelitaan bilaash ah
Montefiore Hill (Waqooyiga Adelaide). Waxay bixisaa muuqaal qurux badan oo magaalada ah, badiyaa habeenkii.
Fiirinta kale waxaa ka mid ah Dabayl Dabayl wadada Belair, iyo Skye dhamaadka Kensington Road.
Waqooyiga Terrace. Ka kaxeynta bariga West Terrace waxay kuu dhaafi doontaa cusbitaalka cusub ee Royal Adelaide, Jaamacadda South Australia ee xarunta West West, jaamacadda cusub ee caafimaadka ee Adelaide, Machadka Cilmi-baarista Caafimaadka iyo Caafimaadka ee Koonfurta Australia (SAHMRI), Xarunta Shirarka ee Adelaide, Casino (Saldhigga Tareenka ee hoose), Aqalka Baarlamaanka, Guriga Dowladda, Maktabadda Gobolka ee Koonfurta Australia, Matxafka Socdaalka (gelitaan bilaash ah), Matxafka Farshaxanka ee Koonfurta Australia (gelitaan bilaash ah), Jaamacadda Adelaide, Jaamacadda Bariga Australia ee Bariga Bariga , goobta ay ku yaalliin Isbitaalkii hore ee Royal Adelaide, iyo Jardiinooyinka dhirta leh. Waa geed soo jiidasho leh oo safaf dhaadheer ku leh dhaqankii gumeysiga ee Koonfurta Australia.
Soo bandhig iftiinka siraad, Cnr Rundle St iyo Pulteney St. Laga soo bilaabo fiidkii ilaa saqbadhkii habeen kasta oo ay weheliso 750 loox oo iftiin leh.
Matxafyada iyo qolalka kale ee Adelaide
Webiga Torrens oo maraya meel u dhow Jaamacadda Adelaide
Adelaide Zoo, Wadada Frome. Maalin kasta 09: 30-17: 00. Meesha kaliya ee ku taal koonfuurta koonfureed si loo arko pandas weyn. Beerta xayawaanku waxay sidoo kale ku faantaa meerkisyo, libaaxyo, shabeello, qoys ka kooban kabirbarasyo ​​iyo qaar quokkas ah.
Matxafka Socdaalka, Kintore Ave (Waqooyiga Maktabadda Gobolka.). Maalin 10: 00-1 7: 00, wuxuu xirmay Jimco wanaagsan iyo 25 Dec ..
Sawirka Farshaxanka Koonfurta Australia, Waqooyiga Terrace (Wadada badhkeed inta udhaxeysa Kintore Ave iyo Frome Road, inta udhaxeysa Matxafka Koonfurta Australia iyo Jaamacadda Adelaide.),. Maalin kasta 10: 00-17: 00, marka laga reebo 25 Dec .. Meel aad u fiican oo lagu arko noocyada noocyada oo dhan. Dukaan dhar / dhar bilaash ah. Bilaash
Matxafka South Australia, Waqooyiga Terrace (Ku xigta Farshaxanka Farshaxanka ee Koonfurta Australia.). Maalin kasta 10: 00-17: 00, marka laga reebo Jimcaha Wanaagsan iyo 25 Diseembar .. Ururinta ugufiican Ururinta Aborijiniska Australiyaanka ah ee adduunka iyo meelaha dhaqamada dhaqameed ee reer Fiktooriya sidoo kale waa nadiif. Bilaash
Xarunta Khamriga Qaranka, Cnr ee Botanic iyo Hackney Road, Hackney,, fax: + 61 8 8303-7444. Isniinta ilaa Jimcaha 09: 00-17: 00, Sabtida ilaa Axadda & ciidaha dadweynaha; Safarada & dhadhaminta 10: 00-17: 00.
Machadka Dhaqanka Aborjuniiska Qaranka Tandanya. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Xarunta Discovery Bay (Glenelg; qaado taraamka taariikhiga ah).
Iftiinka Port Adelaide.
Matxafka Tareenka Qaranka (Port Adelaide). Matxafka tareenka ugu weyn Australia.
Matxafka Duulista Hawada ee Koonfurta Australia (Dekedda Adelaide).
Matxafka Badda ee Koonfurta Australia, 126 Lipson St, Port Adelaide,. $ 8.50, tanaasul $ 6.50, cunug $ 3.50, qoyska $ 22 (2 qof oo waaweyn iyo ilaa 5 caruur ah).
Matxafka Qaranka ee Gawler (khadka tareenka Gawler).
Waxa lagu sameeyo Adelaide
Xeebta Glenelg Beach
Xeebta Glenelg. Xeebta taariikhiga ah ee Glenelg waxay leedahay diyaarad, hudheelka weyn iyo maqaayado badan iyo makhaayado badan. Aad loogu jecel yahay yar iyo weyn, tartamo badan oo kubbadda laliska. Mid ka mid taraamyada taariikhiga ah ka soo qaado Adelaide's CBD maalmaha fasaxa iyo ciidaha, ama cusub tareenka fudud taraamyada waqtiyo kale.
Xeebta Galbeed. Ku habboon socodka qoyska iyo dabaasha. Waxay macquul ahaan ugu dhowdahay labada Glenelg iyo Henley Beach. Xeebta Henley waxaa ku yaal fagaaraha Henley oo martigaliya 15 makhaayadood - oo ah goob cunno fiican. Dhammaan xeebaha ku teedsan xeebta Adelaide waa xeebo ciid ah oo aad u fiican, qaarkoodna waxay leeyihiin musqulo dadweyne iyo biyo qabow. Haddii aad rabto inaad 'qoyso qadka' waxaa jira diyaarado ku yaal (xeebaha hareeraha, laga bilaabo waqooyiga ilaa koonfurta) Grange, Semaphore, Henley Beach, Glenelg, Brighton iyo Port Noarlunga.
Adelaide Oval. Inta lagu jiro bilaha xagaaga u dhaadhac ka Adelaide Oval ciyaarta cricket -ka. Australia waxay martigalisaa dhowr dal oo dalxiis ah xagaaga waxayna dhowr ciyaarood ku ciyaari doonaan dhulkan quruxda badan oo daqiiqado u jira Xarunta Magaalada. Tigidhada loogu talagalay kuwa caalamiga ah waxay u muuqdaan kuwo si dhaqso leh loo jabiyo, laakiin kulamada gudaha waa kuwo soo noqnoqda oo si isku mid ah u xiiso badan.
AFL, Horyaalka ugu sareeya ee Xirfadleyda Xeerarka Australiyaanka ah. Ciyaaraha guriga ee kooxaha maxalliga ah Adelaide Crows iyo Port Adelaide Power ayaa lagu ciyaaraa Adelaide Oval Waqooyiga Adelaide, ka dib markii uu ka soo guuray AAMI Stadium sanadkii 2013. Helitaanka tigidhada ma ahan inay dhibaato ahaato - ka fiiri bogga AFL wixii faahfaahin dheeri ah.
SANFL, gobolka Aussie Rules league, wuxuu leeyahay 5 kulan usbuuci dhamaadka dhowr meelood magaalada iyo xaafadaha. Norwood Oval, guriga Redlegs, wuxuu ku yaalaa Parade-ka Norwood kaasoo hoy u ah maqaaxiyo kala duwan, kafateeriyada iyo baararka lagu iibiyo ciyaarta ka dib.
Adelaide United (kubada cagta), Garoonka Hindmarsh.
Qaab wadareed, 15 Peel St, Adelaide (off Hindley St). Meel waxqabad oo laba dabaq ah oo leh dukaanka zine joogto ah. Waxay martigelisaa bandhigyo faneedyo yar yar, qaar ka mid ah riwaayadaha tijaabada ah ee dheeri ah, qaanadaha doodaha iyo farshaxanka waxqabadka. Inta badan waxay ku urursan yihiin Sannadlaha Qaab-dhismeedka sannadlaha ah ee isla waqtigaas la socda Fringe Festival waxaana loo arkaa inuu yahay beddel tijaabo ah oo dheeri ah, in kasta oo ay jiraan waxyaabo sannadka oo dhan ah. Waxaa loo yaqaan 'hipsters', biirka Jabbaan, iyo cayaaraha nostalgic ee afar-geesoodka ah.
Mid ka mid ah waqtiyada ugu wanaagsan sanadka ee booqashada waa inta lagu jiro Mad Mad, marka la qabto xaflado iyo dhacdooyin fara badan. Kuwaas waxaa ka mid ah Adelaide Fringe, Clipsal 500 Car tartanka, Adelaide Festival, WOMADdelaide iyo Adelaide Cup faraniis carnival.
Adelaide 500 (Clipsal 500 Supercar). Intii lagu guda jiray bartamihii bishii Maarso, dhacdooyinka tartanka loo yaqaan 'Clipsal 500' ee tartanka supercar waa mid aad loo jecel yahay, oo lagu cayaaro xaflado waaweyn oo wadooyin ah, safaf dhaadheer oo riwaayado ah iyo dad badan oo reer Adelaidi ah.
Bandhig Faneed Adelaide. Inta lagu jiro dabayaaqada Febraayo-Maarso, Fringe Festival (labaad ee ugu weyn nooceeda adduunka) iyo Bandhigga Farshaxanka ayaa magaalada ku soo nooleeya muusig toos ah, farshaxanno, dhaanto iyo dhaqan adduunka oo dhan ah. Labaduba waa munaasabado waawayn oo caan ah oo ay soo booqdaan dad ka kala yimid daafaha dunida.
WOMADelaide (Dunida Fanka iyo Qoob-ka-ciyaarka). Bandhig muusig si weyn loo jecel yahay ayaa hadda la qabtaa sannad kasta bisha Maarso. Dadku waxay halkan ka yimaadaan Australia oo dhan iyo dibedda. Waxay muujineysaa Adelaide sida ugu fiican.
Saddex jaamacadood oo kaladuwan ayaa ugu yeera Adelaide home, kuwaas oo ah Jaamacadda Adelaide waa sida ugufiican ee loo tixgaliyo. Labada jaamacadood ee kale ee aagga Adelaide waa Jaamacadda Koonfur Australia iyo University of Flinders. Waxaa jira fursado loogu talagalay ardayda caalamiga ah inay isku qoraan jaamacadahaan, sida ardayda shahaadada, ama qayb ka ah barnaamijyada isdhaafsiga ee jaamacadaha shisheeye.
Si ka duwan magaalooyinka "afarta weyn" ee Australiyaanka ah, noocyada ugu sarreeya ee raaxada sida Louis Vuitton, Gucci iyo Prada kuma laha joogitaan Adelaide. Reer Victoria Adelaide Arcade oo dhanka koonfureed ka xigta Rundle Mall waxay leedahay uruurin qurxoon oo dukaamo iyo dukaamo ku takhasusay sida numismatics, antiques iyo chocolatiers. Meel kale oo wanaagsan oo laga raadsado alaabada raaxada leh waxay noqon doontaa Burnside Village oo ku taal hareeraha bari.
Xarumaha ganacsiga iyo goobaha laga dukaameysto
Suuqa Rundle,. Meel wax lagu iibiyo oo dadka lugaynaya oo keliya ah, oo leh arcadyo badan iyo jidad dhinac ah ayaa ka soo baxaya. Waxay u socotaa si isku mid ah Waqooyiga Terrace. In ka badan 800 oo dukaanno ah.
Shaah Tree Plaza (TTP oo kooban). Xarun wax-iibsi oo dhexdhexaad ah oo leh 250 dukaan. Tea Tree Plaza waa meesha ugu dambeysa ee Adelaide O'Bahn ee baska u go'an oo ka bilowda bartamaha magaalada ee Wadada Hackney. Way fududahay in halkaas laga tago Xarunta Magaalada; basaska badankood ee ku istaaga Grenfell St waxay istaagaan inay u safraan isweydaarsiga TTP iyagoo maraya jidka baska ee O'Bahn. Way fududahay in meel fog laga arko maadaama ay leedahay anteeno weyn iyo qaab dhismeed nooca Ahraamta ah, oo ay dadka deegaanku aad u yaqaanaan, saqafka dukaanka waaxda Myer. Baabuur dhigasho baaxad leh ayaa laga heli karaa agagaarka, dusheeda, iyo hoosta dhismaha. Xarunta dukaamaysiga ee Shaaha Tree Plus oo aad u yar ayaa ku ag taal Tea Tree Plaza.
Westfield Marion Shopping Center. Xarunta wax iibsiga ee ugu weyn Adelaide oo leh 400 dukaan. Waxaa jira basas toos ah oo ka yimaada Xarunta Magaalada.
Magaalada Harbor. Suuqa weyn ee dhexe wuxuu ku socdaa ballaarinta, oo leh dukaamaysiga dukaamaysiga, oo ku yaal geeska galbeed ee Madaarka Adelaide. Kaliya bas yar ayaa ka raaca Madaarka, iyo 30 daqiiqo oo ka socda Xarunta Magaalada.
Waxaa jira xulasho boorsooyin boorsooyin ah oo ku wareegsan boosteejada basaska dhexe.
Adelaide Central YHA, 135 Waymouth St,, fax: + 61 8 8414-3015. $ 75, qolka: $ 90, hoyga: $ 25.50 (YHA / hostelling xubnaha caalamiga ah 10% dhimis) ..
Adelaide Travelers Inn, 220 Hutt St,. Xubnaha kaarka Madowga ah ee Reer Guuraaga waxay helayaan $ 2 $ habeynkiiba ama habeenkii 7-aad oo bilaash ah.
Australiyaanka, 205 Rundle St ,. Australiya waa bakhaar bixisa hoy sare oo ka durugsan meesha baarka. Qolalku waa nadiif oo waa iska aamusan yihiin inkasta oo baarka hoose, inkasta oo joodariyaduhu aysan ahayn tayo fiican. Musqulaha waa la wadaagaa. U dhow Xarunta Adelaide. Laba -laab $ 55, keli $ 35.
Galax Buluug ah, 62 King William St,, lacag-la'aan: 1800 221 529, fax: + 61 8 8231-9598. Kaliya hal meel oo ka durugsan Rundle St Mall laakiin ma jiro sharciyo sigaar cabid ah oo aan la dhaqangelin sida ugu fiican ee looga fogaado haddii aadan qaadanaynin maaskaro gaaska / filtarkaaga u gaarka ah. Ma ahan meesha ugu nadiifsan ama ugu xasilloon laakiin waxay leedahay bar weyn oo leh balkoonad kor ka eegaysa King William St iyo CBD. Wi-Fi: $ 5 / maalin, $ 15 / wk. Qolka hurdada: $ 24 (qiimaha toddobaadlaha sidoo kale); mid gaar ah / mataano / labalaab: $ 70.
Boorsooyinka Wadada Cannon Street (ka soo horjeedda Terminal-ka Baska ee Flinders St). Guriga gudihiisa. Boorsooyin badan oo Irish iyo Ingriis ah oo jecel inay xaflad adag dhigtaan, marka boosku wuxuu u muuqdaa inuu yara buuq badan yahay. Laga soo bilaabo $ 21.
Hoteel 109, 109 Carrington St,. Yar, xasilloon, casri ah, ammaan ah & meel dhexe. Aad nadiif ah. Internet bilaash ah.
Meeshayda Adelaide, 257 Waymouth St,, lacag-la'aan: 1800 221 529. Aad u nadiif ah, jawi wanaagsan oo bulsheed, quraac bilaash ah & bas bilaash ah oo taga xeebta Glenelg. Habeennada BBQ, kubbadda laliska iyo kubbadda cagta oo abaabulan.
Hoteelka Plaza, 85 Hindley St,, fax: + 61 8 8231-2055. Labo laab $ 72, hal $ 66.
Shakespeare International hostel, 123 Waymouth St (150m woqooyi oo ah kireynta baaskiil bilaash ah & xarunta dhexe ee basaska),, lacag la'aan: 1800 556 889, fax: + 61 8 8211-6867. Soo gal: duhur, soo bixitaan: 9:30 AM. Tanaasul wanaagsan oo udhaxeeya nadaafada iyo qiimaha, hudheelkan ayaa soo jiita iskudhaf isku dhafan oo ah deggeneyaasha muddada-dheer iyo xafladaha dalxiis ee goor hore ka taga saldhigga basaska u dhow. Waxay leedahay qol balaaran oo loogu talagay bulshada dhexdeeda jikada si lama filaan ah ayaa loo ilaaliyaa. Baasaboor uma keydin doono sidaa darteed, haddii tani ay tahay wax laga walwalsan yahay, waxoogaa ka sii yara sii YHA dhowr albaab oo hoos u dhaca.
Hotel Ambassador, 107 King William Street,. Hoteelka Midrange ee ku yaal bartamaha magaalada dhisme taariikhi ah. Baarka weyn. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Mantra oo ku taal Frome, 88 Frome St,, lacag-la'aan: 1300 987 604, fax: + 61 8 8223 9014. 4-xiddig hudheel dabaq ah. 72 istuudiyaha, 1, 2 iyo 3 qol jiif, badankood leh balakoonno gaar loo leeyahay, jikooyin si buuxda u qalabaysan iyo tas-hiilaad dharka lagu dhaqdo. Dhammaantood waxay leeyihiin meelo lagu noolaado iyo meelo lagu cunteeyo oo leh telefishanka 'cableTV' iyo filimada guryaha ku jira.
Fagaaraha Mantra Hindmarsh, 55-67 Hindmarsh Sq,, lacag-la'aan: 1300 987 604, fax: + 61 8 8412 3344. Socod gaaban oo ka socda Rundle Mall iyo xaafadda cuntada ee Rundle Street. 179 istuudiyo, 1 & 2 qol jiifka A / C oo leh jikada, musqusha iyo tas-hiilaadka dharka. Qolalka qaarkood waxay sidoo kale bixiyaan balakoon gaar ah oo leh aragtiyo magaalada oo dhan.
BreakFree ku saabsan Hindley, 255 Hindley St,, lacag-la'aan: 1300 987 604, fax: + 61 8 8217 2519. 142 istuudiyaha iskiis ah iyo 2 qol jiif oo ku yaal West End. Guryo waasac ah oo si wanaagsan loo magacaabay oo leh adeegyo casri ah.
Agaasimayaasha BreakFree Studios, 259 Gouger St,, lacag-la'aan: 1300 987 604, fax: + 61 8 8213 2519. Hoteelka Outi ee u dhow CBD, Suuqa Dhexe iyo makhaayadaha.
Motels Chain Dahab. Meelo badan oo ku yaal Adelaide oo dhan.
Adelaide City Park Motel, 471 Pulteney St, lacag-la'aan: 1800 231 444, fax: + 61 8 8223-1133. Qolalka laba jibbaaran laga bilaabo $ 88 habeenkii.
Holiday Inn Adelaide, 65 Hindley St,, fax: + 61 8 8237 3800. Laba qol $ 150. Raaxo leh, laakiin bilowga dhammaadka abuurka ee Waddada Hindley.
Ku raadinta King William, 82 King William St,, fax: + 61 8 8217 5050. Guryo adeeg ayaa loo heli karaa kireyn waqti-gaaban ama waqti-dheer ah. 1-qol oo jiif ah laga bilaabo $ 145 muddo-gaaban ah ama $ 135 oo kirada muddada-dheer ah.
Guryo ku yaal Pulteney (Quest Mansions), 21 Pulteney St,, fax: + 61 8 8223-4559. Guryo adeeg ayaa loo heli karaa kireyn muddo-gaaban ama waqti-dheer ah. Guryaha istuudiyaha $ 138 muddo-gaaban, $ 111 muddo-dheer. 1-qol jiif ah laga bilaabo $ 196 muddo-gaaban, $ 158 kirooyinka muddada-dheer.
Guryaha Esplanade, 80 Seaview Wadada Galbeed Xeebta,, fax: + 61 88 356 4478. 1-qol jiif $ 75, 2-qol ka $ 90.
Guryaha Frogmore, 13 Wadada Milatariga Galbeed,. Xeebta Meel u dhow xeebta oo leh aragti aad u fiican oo Mtf Lofty Range). Guryo hal qol jiif ah oo ka bilaabma $ 75 habeenkii iyo laba qol jiif $ 90 habeenki, seddex qol jiif $ 110 $ habeenkiiba.
Rydges South Park Adelaide, lacag-la'aan: 1300 857 922. 1 South Terrace, (ku xigta seeraha koonfureed). Muuqaallada laga helo buuraha 'Adelaide Hills' waxaa ku yaal 97 qol oo leh 9 qollo isboorti.
Safaaradda Oaks, 96 Waqooyiga Terrace ,. Soo gal: 2PM, out-out: 10AM. Gudaha CBD, Hantidan waxay kakoobantahay guryo kaladuwan oo leh Wi-Fi bilaash ah, marin barkadaha dabaasha oo kulul, qolka jimicsiga iyo meelaha gawaarida la dhigto. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Deegaanka iStay, 185 Morphett Street,. Soo gal: 2PM, out-out: 10AM. Uruurinta 1 iyo 2 qol jiif oo leh jikada iyo tas-hiilaadka dharka lagu dhaqo, Jacuzzi, barkadda kulul ee gudaha, spa iyo qolka uumiga (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Towers Liberty Oaks, 25 Colley Terrace, Glenelg,. Soo gal: 2PM, out-out: 10AM. Hantidan waxay ka kooban tahay dabaqyo xeebta ku habboon oo ku habboon fasaxyada ama safarada ganacsiga. Wi-Fi bilaash ah, marin barkadda lagu dabaasho iyo tas-hiilaadka jimicsiga ayaa la heli karaa. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hilton Adelaide, 233 Victoria Sq,, fax: + 61 8 8217 2001. Soo gal: 2PM, out-out: 11AM. Qolalka loo yaqaan 'Deluxe king' ayaa qolalkoodu cabbirkoodu ahaa $ 250 / habeenkii.
Qasnada Madiina Grand Adelaide, 2 Flinders St,, fax: + 61 8 8112 0199. Soo gal: 2PM, out-out: 10AM. 80 qol oo istuudiyaha ah iyo 1-2 qol jiif oo ku yaal dhismihii Hanti-dhowrka hore ee Gobolka. Hoteelka ayaa iska indhatiraya Victoria Square wuxuuna daqiiqado u jiraa Rundle Mall iyo Adelaide Central Market. Qolalka istuudiyaha laga bilaabo $ 210.
Hoteelka Grand Hotel Adelaide, 55 Waymouth St (Xarunta ganacsiga dhexe),. Soo gal: 2PM, out-out: 11AM.
Stamford Plaza Adelaide, 150 Waqooyiga Ter,, fax: + 61 8 8231 7572. Boqorada ayaa cabirkeedu ahaa $ 225.
Adeega Intercontinental, Waqooyiga Terrace ,. 344 $. (la cusbooneysiiyay Mar 2016)
Crowne Plaza Adelaide, 16 Hindmarsh Square,.
Nabdoonow oo iska ilaali khayaanada ka dhaca Adelaide
Lambarka gurmadka ee Australia oo dhan waa 000. Adeegga ambalaaska, adeegga dab damiska iyo booliska ayaa laga heli karaa lambarkan. Caawinta booliska ee aan degdegga ahayn, garaac 131 444.
Adelaide waxaa loo tixgeliyaa inay tahay magaalo amni ah, waana wax aad uga badan caasimadaha kale ee Australia. Dadku si kastaba ha noqotee waa inay ku dhaqmaan nabadgelyada shakhsi ahaaneed, gaar ahaan habeenkii.
Dhulka seerayaasha ah ee magaalada waa kuwo aan si fiican u shidaneyn waxaana ugu fiican in laga fogaado wixii ka dambeeya mugdiga sababtoo ah joogitaanka dadka sakhraansan. Haddii aad u baahan tahay inaad ka gudubto jardiinooyinka si aad u gaarto xaafadaha magaalada, ku dhow wadada. Qaadashada taksi ama gaadiidka dadweynaha ayaa lagula talinayaa habeenkii.
Tareenada Adelaide guud ahaan waa kuwo la isku halleyn karo waxayna ku yimaadaan kuna baxaan jadwalka. (Basasku waxyar bay ka bedbeddeli karaan.) Waxaa jira ilaaliyeyaal dhammaan tareennada wixii ka dambeeya 7PM iyo adeegyo badan oo tareenno ah ayaa leh xiriirro basas.
Habeenkii, boolisku waxay si firfircoon u gaaf -wareegaan Bartamaha Magaalada, gaar ahaan Hindley Street, tan dambe waa halka ay ku badan yihiin meelaha lagu caweeyo iyo baararka magaalada. Darajooyinka taksigu waxay u dhow yihiin Adelaide Casino oo ku taal Waqooyiga Terrace, Hilton Adelaide Hotel oo ku yaal Fagaaraha Victoria, iyo isgoyska Rundle Street iyo Pulteney Street oo ka baxsan meesha cuntada degdegga ah ee Hungry Jacks. Inta badan adeegyada gaadiidka dadweynaha ee caadiga ah waxay dhammaadaan kahor ama saqda dhexe, laakiin khaas ah Adeegyada basaska Habeen-ka-dambe ayaa shaqeeya habeenka Sabtida oo keliya, iyagoo ka safraya magaalada una socda meelo aad u iftiimaya oo ku yaal agagaarka Adelaide.
Caafimaadka ku joog Adelaide
Meelaha fog ee Adelaide ee qaaradda ugu engegan macnaheedu waa in dhammaan biyaheeda la cabbo laga helo Wabiga Murray ama kaydadka maxalliga ah. In kasta oo biyuhu yihiin kuwo si fiican ammaan u ah in la cabbo, haddana waxay ka dhigeysaa biyaha tuubbada kuwo aan u cuntami karin kuwa aan u baran waxaana ugu wanaagsan in la sifeeyo.
Waxaa jira marin ballaaran oo Wi-Fi ah oo bilaash ah (dekedda 80 kaliya) ee CBD iyo garoonka diyaaradaha ee ay bixiso Internode.
Qunsuliyadaha ku yaal Adelaide
Qunsuliyadda Boqortooyada Ingiriiska waa la xiray, sidaa darteed Guddiga Sare ee Ingiriiska ee Canberra ayaa ugu dhow.
Germany, PO Box 90 - Rundle Mall ,,. Isniinta ilaa Jimcaha 10 AM-1PM si adag balan. Qunsuliyada sharafta leh kaliya.
Thailand, Qolka 9, 144 Koonfurta Terrace ,. Isniinta ilaa Jimcaha 11 AM-3PM, marka laga reebo fasaxyada Thai iyo Australia. Qunsuliyada sharafta leh.
Xagee laga aadayaa marka xigta Adelaide
Degitaanka Jarmalka ee Hahndorf, oo ku taal Adelaide Hills, waa goob caan ku ah dalxiisayaasha iyo dadka deegaanka si isku mid ah.
Adlaide Hills, oo ay ku jiraan Shirka 'Mt Lofty Summit', wuxuu bixiyaa aragtiyo cajaa'ib leh oo ku saabsan aagga magaalada Adelaide. Buurta loo yaqaan 'Adelaide Hills' waa taxane tuulooyin ah, mid walbana waxay leedahay dabeecad u gaar ah. Gaar ahaan, magaalooyinka Hahndorf iyo Stirling ayaa mudan in la booqdo.
Gobollada khamriga ee Adelaide Hills, McLaren Vale, Barossa Valley iyo Yorke Peninsula
Jasiiradda Kangaroo. Baadh deegaanka dabiiciga ah.
Dibedda (Koonfurta Australia). Madaxa u aad dhanka woqooyi si aad u sahamiso quruxda dabiiciga ah iyo taariikhda soohdimaha ee Flinders Ranges iyo Wilpena Pound
Victor Harbor, kaliya saacad ama wax u dhaaf koonfurta magaalada Adelaide. Jasiiradda Granite waa mid ka mid ah meelaha yar ee aad ku arki kartid Fanaaniinta Xanrunta ku nool deegaankooda dabiiciga ah. Booqo xeebta dusha sare ee Pt Elliot, Middletown iyo Goolwa.
Gidaarka xiiqda, keydka Barossa.
Jasiirada Jasiiradda Yorke waa meel caan ah oo loo dalxiis tago dadka reer Adelaidians, waxayna ka dalxiis yar yihiin Victor Harbor, magaalooyinkuna waxay ku teedsan yihiin xeebta iyo seeraha Qaranka ee Innes oo ku yaal sagxadda gacanka.
Alice Springs, 1,500 km oo baabuur wadis ah. Joogsiyada waaweyn ee jidka waa Port Augusta iyo Coober Pedy. Ugu dambeyntiina, adigoo sii maraya Gobollada Waqooyiga waxaad gaari doontaa meesha laga baxo ee Uluru-Kata Tjuta National Park.
Melbourne, iyada oo loo sii maro Xadiiqadda Qaranka ee loo yaqaan 'Coorong', oo ay ku xigto Xeebta Limestone iyo ugu dambayn Wadada Weyn ee Weyn inta aan la gaarin Melbourne.
Jasiiradda Eyre. Booqo magaalada taariikhiga ah ee Port Lincoln halkaas oo aad ka arki karto beero waaweyn oo tuna ah iyo sidoo kale inaad quusato Kalluumeysato waaweyn oo White ah (qafis) ama aad ku dabbaashaan hoonbarrooyinka iyo shaabadaha.
Hoteelada Xalaal & Muslim Friendly Hotels ee Adelaide
Hoteelka Adabco Boutique Adelaide
Adelaide Meridien Hotel & Guryo
Hoteelka Adina Apartment Hotel Adelaide Khasnadda
Safiirada Hotel Adelaide
Guryaha ku yaal George
Hoteelka BreakFree Adelaide
BreakFree Agaasimayaasha Studio Adelaide
Raaxada Hotel Adelaide Riviera
Raaxada Hotel Highlander Gilles Plains
Raaxada Inn & Suites Sombrero Adelaide
Raaxo Inn Anzac Highway Adelaide
Raaxada Inn Haven Marina Adelaide
Raaxo Inn Manhattan Enfield
Raaxada Inn On Marion Adelaide
Adelaide ee raaxada Inn Scotty
Raaxada Wadanka Adelaide
Xarunta Dabka Inn Adelaide
Guryaha Glenelg Pacific
Guryaha Glenelg Seaway
Grand Mercure Mount Lofty House ee Adelaide Hills
Hoteelka Hilton Adelaide
Hoteelka Grand Chancellor Adelaide On Currie
Hoteelka Grand Chancellor Adelaide On Hindley
Hoteelka Richmond Adelaide
Hotelka InterContinental Adelaide
Guryaha ISTA ee Deegaanka Adelaide
Hoteelka weyn ee Minima Hotel Adelaide
Apartment Old Libaax Guri Adelaide
Apartment Street Majestic Tynte Adelaide
Fagaaraha Mantra Hindmarsh
Beerta Fasaxa Marion
Guryaha Miller Adelaide
Guryaha Piccadilly On Childers Adelaide
Tayada Hotel Old Adelaide
Tayada Hotel tayo leh On Park Adelaide
Hoteelka Grand Hotel Adelaide
Hoteelka Stamford Plaza Adelaide
Hoteelka Sebel Playford Adelaide
Guryaha Waqtiga Ciyaaraha Semaphore
Sariirta & Quraacda Guriga Willunga
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal ee Australia > Tilmaamaha Safarka ee Adelaide Xalaal
eHalal Safarka Mart